Momba anay - HEBEI FIZA TECHNOLOGY CO., LTD
MANarahaba antsika TEZNOLOGI FIZA
Ny orinasanay dia niorina tamin'ny taona 2005 ary ny foiben-toeran'ny foibeny dia ao shijiazhuang izay toerana kanto any Chine. Ny asa lehibe dia misy ny famokarana sy ny varotra ny vokatra azo avy amin'ny zava-mahadomelina sy ny famonoana afo, ary koa ny fanondranana teknolojia klôro dioksida. Ny orinasanay, mikendry ny fampandehanana maharitra sy ny fampandrosoana maharitra, dia manizingizina hatrany amin'ny finoana mifantoka amin'ny fananganana marika tsara ho an'ny orinasa ary handresy ny tsena sy ny mpanjifa amin'ny kalitaon'ny vokatra tsara sy serivisy tsy azo antoka. Nahazo loka maro ny orinasanay toa ny "orinasa azo atokisana shijiazhuang", "Kilasy A ho an'ny famokarana azo antoka sy orinasa azo itokisana" ary "orinasa modely amin'ny fananganana kolontsaina fiarovana". Ankehitriny ny orinasanay dia nitombo ho orinasa lehibe eo amin'ny sehatry ny indostria ary nahazo dera midadasika sy fanekena.
Ny orinasanay dia manana sampana sy famokarana betsaka manerana ny firenena, manana teknika famokarana matotra simika organika sy ekipa sangany ho an'ny famokarana. Ny orinasanay koa dia nirotsaka tamin'ny indostrian'ny simika nandritra ny taona maro, ary ny volan'ny fanondranana dia mijanona eo aloha hatrany. ny indostria. Ankehitriny ny orinasa dia nahavita fampisehoana orinasa lehibe ary nahazo laza malaza amin'ny indostria.
Nandritra ny fanitarana ny orinasa, ny orinasanay dia mitazona fifanakalozana sy fiaraha-miasa amin'ireo mpanamboatra maro ao an-trano sy any ivelany, ary namorona fifandraisana tsara amin'ny orinasa marobe voatanisa sy orinasa marobe any Azia atsimo atsinanana, Eropa, aostralia, afovoany atsinanana ary firenena hafa sy faritra any ampitan-dranomasina .
Niorina nandritra ny taona maro, ny orinasanay dia nahazo mpanjifa marobe an-trano sy any ivelany, ary nahazo valiny tsara avy amin'ny mpampiasa rehetra momba ny teknika famokarana mandroso, kalitaon'ny vokatra avo lenta ary serivisy aftersales tena tsara. Miaraka amin'ny fanatsarana hatrany ny lazan'ny laza, miaraka amin'ny fanatsarana hatrany ny teknika famokarana sy ny fitantanana, tsy mitsaha-mitombo ny volan'ny orinasantsika.
Orinasa mendri-pitokisana Shijiazhuang
Kilasy A ho an'ny famokarana azo antoka sy orinasa azo itokisana
Orinasa modely amin'ny fananganana kolontsaina fiarovana
Vonona ny hahafantatra bebe kokoa momba anay?
Ny tanjonay dia ny "hahazo ny fahatokisan-tenanareo sy ny fanohananareo amin'ny serivisy ataonay sy ny vokatra avo lenta; mifanasoa ary mahazoa toe-javatra mandresy." Ny orinasanay dia vonona hiara-hiasa am-pahatsorana amin'ny lafim-piainana rehetra any an-trano sy any ivelany mba hamoronana ho avy mamiratra!